Mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlammaanka Soomaaliya oo ka socda Muqdisho. – Radio Daljir
Muqdisho, Dec, 12 – Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaliya ayaa maanta mar kale shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaas oo ay kaga soo horjeedaan G. baarlamaanka Sh. Xasan Sh. Aadan oo ay ku eedeeyey nayaa inuu si khaldan u isticmaalo awooddii sharci ee loo wakiishay.
Mudanayaasha wada Mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha ayaa ku dooyaya in guddoomiyuhu lumiyey awooddii guddoomiyenimo ka dib uu jabiyey qodobbo sharci ah.
Qaar ka mid mudanayaashii shirkaasi ka qaybgalay ayaa dhankooda difaacay guddoomiyaha barlamaanka waxayna mooshinkaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah.
Xildhibaan Max?ed Qanyare Afrax oo ka mid mudanayaasha baarlamaanka kana mid ah xubnaha ka soo horjeeda mooshinkaasi ayaa tilmaamay in heshiikii Kambala ee bishii Sep. 2011 oo qorayey inaanaan mooshin laga keeni Karin madaxda dawladda inta ka horreysa bisha Aug. 2011 ayna baarlamaanku horay u ansixiyeen heshiiskaasi, sidaas darteedna uu mooshinka hadda socdaa yahay sharci darro.
Shalay ayaa xubnaha mooshinkaan wada waxay laamaha amniga ee dawladda Federaalka ka codsadeen in guddoomiyaha laga joojiyo safarada dibadda inta mooshinkaani dhan u dhacayo, xilligaas oo safar u baxayey guddoomiyuhu.